Sida Loo Dejiyo Laydhka 3-Dhibcood ee Fiidiyowyaashaada Live | Martech Zone
Axad, Oktoobar 18, 2020 Talaado, Maarso 2, 2021 Douglas Karr
Waxaan u sameynay xoogaa fiidiyowyo Facebook Live ah oo loogu talagalay macmiilkayaga oo adeegsanaya Istuudiyaha Furaha iyo gabi ahaanba jecel barmaamijka fiidiyowga badan ee fiidiyaha ah. Mid ka mid ah aagagga aan doonayay inaan ku hagaajiyo wuxuu ahaa nalalkayaga, in kastoo. Anigu waxaan ahay wax yar oo cusub oo fiidiyow ah markay timaaddo xeeladahaas, markaa waan sii wadi doonaa inaan cusbooneysiiyo qoraalladan ku saleysan jawaab celinta iyo imtixaanka. Waxaan ka baranayaa tan tan xirfadlayaasha igu xeeran sidoo kale - qaar ka mid ah halkan ayaan ku wadaagayaa! Waxa kale oo jira tan badan oo khayraad badan oo khadka tooska ah ah.
Waxaan ku haynaa saqafyo 16-cagood ah istuudiyahayaga oo si aan caadi ahayn u iftiimaya nalalka daadadka ee saqafka. Waxay keeneysaa hooskii aad u xun (oo si toos ah hoos u tilmaamaya)… marka waxaan la tashaday sawir qaadeheena, AJ ee Ablog Shineemo, in lala yimaado xal la awoodi karo, oo la qaadan karo.
AJ ayaa i baray 3-dhibic oo nalalka ah waana la yaabay sida khaldan ee aan u ahay laydhka. Marwalba waxaan u maleynayay in xalka ugu fiican uu noqon doono nal LED ah oo lagu rakibay kaamerada oo si toos ah ugu abaareysa cidii aan wareysaneyno Khalad Dhibaatada iftiinka tooska ah ee mawduuca hortiisa ayaa ah inay dhab ahaantii maydho cabirka wajiga halkii ay ku amaani lahayd.
Waa maxay Laydhka 3-dhibic?
Himilada nalka 3-da ah ayaa ah in la muujiyo oo la muujiyo cabirka maaddada (yada) fiidiyaha. Iyada oo la dhigo laydhadhka istiraatiijiyad ahaan mawduuca, ilo kasta waxay iftiimisaa cabbir gaar ah oo mawduuca ah waxayna abuurtaa fiidiyoow leh dherer, ballac, iyo qoto dheer - dhammaantood iyadoo la tirtirayo hooska aan fiicnayn.
Iftiiminta saddexda-dhibic waa farsamada ugu badan ee la isticmaalo ee lagu bixiyo iftiiminta fiidiyowyada.
Saddexda nal ee nalka 3-dhibic waa:
Iftiinka Muhiimka ah - kani waa iftiinka koowaad oo caadi ahaan wuxuu ku yaal dhinaca midig ama bidix ee kamaradda, 45 ° ayuu ka socdaa, isagoo u tilmaamaya 45 ° hoos mowduuca. Isticmaalka faafiyaha waa lagama maarmaan haddii hoosku aad u adag yahay. Haddii aad banaanka ku joogto iftiin dhalaalaya, waxaad u isticmaali kartaa qorraxda nalkaaga muhiimka ah.
Buuxi Nuur - iftiinka buuxsamayaa wuxuu ka ifayaa mawduuca laakiin xagal dhinac ah si loo yareeyo hooska uu soo saaray nalka fure. Caadi ahaan waa la faafiyay oo qiyaastii kala badh nalka iftiinka furaha. Haddii iftiinkaagu aad u iftiimayo oo soo saarayo hadh badan, waxaad isticmaali kartaa muraayad si aad u jilciso iftiinka - adigoo u jeedinaya iftiinka buuxiya muraayadda oo ka tarjumeysa iftiinka baahsan ee mawduuca ku jira.
Nalka Iftiinka - sidoo kale loo yaqaan qarka, timaha, ama nalka garabka, iftiinkani wuxuu ku iftiiminayaa mawduuca gadaashiisa, isagoo ka soocaya maaddada asalka. Dadka qaar waxay u isticmaalaan dhinac si ay kor ugu qaadaan timaha (oo loo yaqaan kicker). Sawir qaadayaal badan ayaa isticmaala a kali ah taasi waa mid si toos ah diirada u saareysa halkii aad si aad ah ugu baahsan laheyd.
Hubso inaad ka fogaato xoogaa masaafo ah inta udhaxeysa maaddadaada iyo asalka si daawadayaashaadu ay diiradda kuu saaraan halkii ay ka ahaan lahaayeen hareerahaaga.
Sida Loo Dejiyo Laydhka 3-Dhibic
Waa kuwan fiidiyoow cajiib ah, macluumaad ku saabsan sida si habboon loogu dejiyo nalalka 3-dhibic.
Laydhka lagu taliyay, heerkulka midabka, iyo kuwa faafa
Markii la igu taliyay sawir qaadeheyga, waxaan iibsaday qalabka la qaadi karo Nalalka loo yaqaan 'Aputure Amaran LED' iyo 3 ka mid ah Xirmooyinka fidiyaha dhaxan. Nalalka waxaa si toos ah loogu shaqeyn karaa laba baakad batari ama waxay ku xiran yihiin korontada la socota. Xitaa waxaan iibsanay taayirro si aan si fudud ugu rogrogno xafiiska markii loo baahdo.
Nalalkaani waxay bixiyaan awood ay ku hagaajiyaan heerkulka midabka. Mid ka mid ah khaladaadka badan oo sawir qaadeyaal cusubi sameeyaan ayaa ah inay isku daraan heerkulka midabka. Haddii aad ku jirto qol iftiin leh, waxaa laga yaabaa inaad damiso inaad damiso laydhadh kasta oo halkaa yaalla si looga fogaado isku dhaca heerkulka midabka. Waxaan xirxireyaa indhooleyaashayada, waxaan damineynaa nalalka dusha sare, waxaanna u dejineynaa laydhdeena 'LED' 5600K si aan u siino heerkul qabow.
Waxaan sidoo kale dooneynaa inaan ku rakibno xoogaa nalalka istuudiyaha fiidiyowga dusha sare miiska dusha sare si aan ugu sameyn karno tallaalada tooska ah ee barmaamijkeenna Facebook Live iyo Youtube Live. Waa xoogaa shaqo dhisme ah maadaama aan u baahannahay inaan dhisno qaab taageeraya sidoo kale.
Nalalka loo yaqaan 'Aputure Amaran LED' Xirmooyinka Qalabka Frostus
Shaacinta: Waxaan uga faa'iideysaneynaa xiriiriyeyaasha xiriirka ee Amazon ee boostadan.
Tags: Nalalka 3-dhibic5600kaputureaputure amaraniftiinka dambexirmada laydhka ugu fiicanIftiin buuxiiftiinka timahaIftiinka muhiimka ahkickerlaadarka laadadkamidabka iftiinkaiftiinka iftiinkaaragtida iftiinkanalalXirmo nalalkanalalkakali ahMuuqaalistuudiyaha istuudiyahanalalka videoxirmada nalalka fiidiyowganalalka fiidiyowga
WordPress Plugin: Fiidiyow ka fur Fudud Iftiinka leh Elementor